ọnwa: March 2020
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Na-eto eto-emekarị n'ebe ndị ọzọ environmentally-enyi na enyi na-ama edemede ọtụtụ, na iche iche akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, atumatu ụwa, na nnukwu obodo na obere obodo myiri. One of the many signs of this is the increasing use of renewable energy in people’s everyday life and work in spheres it…
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji Solo njem na ya kacha mma bụ na-agwagbughị agwagbu n'imeju ọchịchọ onwe na spontaneity. Ọ bụ nnwere onwe na-abịa ma na-dị ka ị biko, nọrọ otu ebe ogologo na a whim, mafere saịtị azụmahịa; ma ọ bụrụ na ị na-apụghị esifịna. The only compromises you need to make…
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji The Coronavirus akasiaha kemgbe a nnukwu akpata nchegbu n'ihi na ndị mmadụ gburugburu ụwa, ma ikekwe otu nke kasị ukwuu okwu na ihu njem. N'ihi na njem atụmatụ siri ike ịgbanwe na tiketi na-ama na-gbaa akwụkwọ, it may make more sense for…